longtrainjourneys Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaan si adag u aaminsan safarka tareenka in uu yahay mid ka mid ah hababka ugu fiican oo ugu soo kobcaya, saaxiibtinimo oo ay safarka. Si taas loo gaaro, aannu isku duba iyada oo ku dhowaad laba dersin ka shaqeeya tareenka oo kala duwan si aad u soo qaado ugu wanaagsan oo ugu jaban tigidhada tareenka ee guud ahaan Yurub. Tan macnaheedu waa waan awoodnaa…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo mar aad rumaysan karo ku dhawaad ​​waqti in ee sannadka? Waa markii ugu quruxda badan ee sannadka! Run ahaantii aad u hesho galay ruuxa la Best ee Suuqyada Christmas ee Germany! Laga soo bilaabo dhammaadkii November ilaa Christmas Eve, wareegga ah ee magaalooyinka oo dhan Germany waa cunnaha…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Nabad iyo raaxo. Laba erey oo aad dhif ku maqashid waalidiinta oo adeegsanaya markay u sheegayaan sheekooyinkooda fasaxa ee carruurta. Sidaas, waxaan go'aansanay inaan ku siino tilmaamaha ugu muhiimsan ee safarka tareenka adiga iyo carruurta ku nool Yurub. Waxaa jira uun wax ku saabsan tareennada oo carruurta dejiya…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Mar haddii aad la kulantay raaxada, ku habboonaanta, iyo guud ahaan cajiibka safarka tareenka, waa in nolosha pre-tareenka laabto adag. Gaar ahaan marka aan ka hadleynay marinnada Best tareenka Yurub ee xagaaga. qaaradda A ka buuxaan wadooyinka muuqaal dabiici ah, muuqaalka muuqaalka, iyo siyaado ah meela aan caadi aheyn…